2 Ụzọ Idozi
> Resource> Utility> Ne Sistem? 2 Ụzọ idozi ya!
Enyemaka! Efu Sistem na Windows!
Ọ pụrụ n'ezie ịbụ ihe ọzọ manụ karịa nke a: Mgbe ọ nọ ọdụ n'ihu kọmputa na-amalite na ya, ọ na-enye gị azụ a ozi si "efu sistemụ" ma ọ bụ "Ọrụ usoro ahụghị" na buut. Ndị kpatara nke a njehie na-ike mbanye na-emerụ, buut ndekọ bụ corrpted, BIOS adịghị ịchọpụta diski ike, na-efu ma ọ bụ merụọ command.con, virus ọrịa, wdg
Idozi ya, na ị ga-ahụ gị sistemụ ga-aghọ nkịtị.
2 ngwọta dị mfe na-azụ gị efu sistemụ
Ị nwere ike idozi nke a sistemụ efu nsogbu mfe na effortlessly site onwe gị na Windows OS DVD (Windows 7, Vista na XP). Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Windows OS DVD, m ka nwere ọzọ ngwọta maka gị.
Ngwọta 1. Idozi ya Windows OS DVD
1. Fanye Windows OS DVD na kọmputa gị.
2. Pịa a isi mgbe ị na-jụrụ (buut si DVD).
3. Mgbe ahọrọ "Rụzie kọmputa gị", ọ bụghị "Wụnye ugbu a", cheta nke a.
4. Họrọ sistemụ mgbe installer searches maka Windows echichi, na pịa "Ekem".
5. Wee pịa "Mmalite rụkwaa". Ọ ga-akpaghị aka idozi nsogbu ndị na-egbochi Windows si amalite.
Solution2. Idozi ya na a bootable disk / USB
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Windows OS DVD, na enweghị atụmatụ na-emefu ọtụtụ narị dollar na ya, ị nwere ike na-otú a. Na-a bootable disk ma ọ bụ USB nwere ike idozi nsogbu gị kwa. Wondershare Liveboot CD / USB pụrụ ịbụ ezi nhọrọ maka gị ịrụzi a sistemụ na-efu nke n'enweghị kpam. Na ọ bụ ihe competitively ọnụ ahịa ya, tụnyere ndị Windows DVD.
1. Mepụta a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na Wondershare LiveBoot 2012. Fanye a ide CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa na-agba ọsọ ahụ Wondershare LiveBoot. Họrọ ndị nduzi nke na-eke a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye dị ka gị chọrọ. Ị na mkpa ịrụ a click na-ere ọkụ bọtịnụ na center.
2. Fanye LiveBoot bootable CD ma ọ bụ USB n'ime kọmputa gị, mgbe ahụ, Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa na pịa F12 ga-esi n'ime buut NchNhr. Họrọ USB CD-ROM Drive na n'ihu. Mgbe ahọrọ "buut si LiveBoot".
3. Mgbe na-n'ime usoro, LiveBoot ga-oru-akpaghị aka. Họrọ "Windows Iweghachite" n'elu taabụ ma kụrụ "buut Crash Ngwọta" n'aka nri menu. Na akụkụ nke "Pịnye A njehie ozi", ị ga-ahụ "na-efu sistemụ" na Nke 5.
4. The isi ihe mere sistemụ na-efu bụ n'ihi na nke mmebi nke MBR, otú na-usoro 1 dị ka ya ntụziaka iji rụkwaa ya.
Ọ bụrụ na usoro a na-adịghị arụ ọrụ, na-agba ọsọ a disk ego idozi ọjọọ sectors nke ga-emetụta gị usoro faịlụ loading, ma ọ bụ na-agba ọsọ bootsect iwu na iwu ozugbo ịrụzi buut okuku. Ọ bụrụ na ndị a niile na-adịghị enye aka gị, sistemụ arụmọrụ ga e mebiri emebi na-egbu egbu, na ị ga-ewere ikpeazụ onye reinstall gị Windows na Office. Dịghị mkpa, a LiveBoot pụrụ inyere gị aka gbapụta gị Office isi na Windows CD isi na otu click na akụkụ nke "Paswọdu & Key Finder", ọ dịghị ego na-eri.
Naghachi data si "System Operation na-efu" na kọmputa na Wondeshare LiveBoot CD / USB
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu nke adịkwa mkpa faịlụ gị "System Operation na-efu" na kọmputa, Wondershare Liveboot CD / USB nwekwara ike naghachi data site na kọmputa kwa.
Mgbe attaching CD / USB na kọmputa gị na-launching Wondershare Liveboot, ị nwere ike họrọ "Data Recovery" nhọrọ ke window.
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi niile partitions / draịva na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa ịchọ, wee họrọ faịlụ mkpa ka ị naghachi mgbe scanning.
Kara gị mma eji ọhụrụ nchekwa na ngwaọrụ na-azọpụta ha natara data. N'ihi na faịlụ-apụghị enweta ma ọ bụrụ na ị na-azọpụta ha na Liveboot CD / USB